မွေးမြူရေးပညာဌာန | University of Veterinary Science, Yezin
မွေးမြူရေးပညာဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တက္ကသိုလ်စတင် ဖွင့်လှစ်ကတည်းက ကျောင်းသား/သူများအား မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို စာတွေ့/လက်တွေ့ မျှဝေပေးရာအဓိကဌာနကြီးတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။
မွေးမြူရေးပညာဌာန၏ဌာနမှူးအဖြစ် ဒေါက်တာသန်းဌေးမှ တာဝန်ယူနေစဉ် (၁၉၈၃)ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်ပိုင် သရုပ်ပြမွေးမြူရေးခြံကို မွေးမြူရေးပညာဌာနက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပြီး ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအတွက် စာတွေ့ လက်တွေ့သင်ကြားမှု အထောက်အကူများစွာရရှိခဲ့ပါသည်။ မွေးမြူရေးပညာဌာန၏ ဌာနမှူးများအဖြစ် ဒေါက်တာထွန်းစိန်၊ ဒေါက်တာအောင်သန်း၊ ဒေါက်တာနွဲ့နွဲ့ထင် နှင့် ဒေါက်တာခင်နှင်းဆွေတို့မှ အဆက်ဆက် တာဝန်ယူခဲ့ကြပါသည်။
(၁၉၉၆)ခုနှစ်တွင် ၎င်းသရုပ်ပြမွေးမြူရေးခြံကို မွေးမြူရေးအစားအစာနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရသော်လည်း ကျောင်းသူကျောင်းသားများက လက်တွေ့ပြသရန်အတွက် တက္ကသိုလ်ပိုင် ဒေသနွားမွေးမြူရေးခြံကို ဆက်လက် တာဝန်ယူခဲ့ရပါသည်။
ထို့နောက်ဝန်ကြီးဌာန၊တက္ကသိုလ်နှင့် ပြင်ပမွေးမြူရေးကုမ္ပဏီများ၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် သင်ကြားမှုအထောက်အကူပြု သရုပ်ပြမွေးမြူရေးခြံများ ဆက်လက် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၀)ခုနှစ်တွင် တက္ကသိုလ်နှင့်မြန်မာစီပီလိုက်ဖ်စတော့ခ် ကုမ္ပဏီတို့ ဖက်စပ်ပူးပေါင်း၍ သရုပ်ပြကြက်မွေးမြူရေးခြံများ (အသားစားကြက်နှင့်ဥစားကြက်)၊ သရုပ်ပြ နွားမွေးမြူရေးခြံတို့ကိုတည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းခြံများကို မြန်မာစီပီလိုက်ဖ်စတော့ခ် ကုမ္ပဏီမှ အဓိကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီး အခြားလိုအပ်သည့်အရာများကို တက္ကသိုလ်မှ စီစဉ်ထောက်ပံ့ပေးပါသည်။
(၂၀၁၆−၂၀၁၇) ပညာသင်နှစ်တွင် သရုပ်ပြ ဝက်မွေးမြူရေးခြံနှင့် သရုပ်ပြ နွားမွေးမြူရေးခြံတို့ကို ထပ်မံတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး မွေးမြူရေးပညာဌာန၏ ဦးဆောင်ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားကျောင်းသူများ လက်တွေ့လေ့လာရန်နှင့် အသေးစားသုတေသနများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
မွေးမြူရေးဆိုင်ရာဆေးတက္ကသိုလ်တွင်Master of Philosophy ဘွဲ့ကို ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် စတင်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ မွေးမြူရေးပညာဌာန၏ ပထမဆုံးတိရစ္ဆာန်မဟာဆေးသိပ္ပံဘွဲ့ (M.V.Sc.) ကို(၁၉၉၄) ခုနှစ်တွင် စတင်ရရှိခဲ့ပြီးယနေ့အချိန်ထိမွေးမြူရေးပညာဌာနမှ ဘွဲ့လွန်ရရှိသူစာရင်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
စဉ်	ဘွဲ့အမည် အရေအတွက်
၁။	M. Phil. ၂ – ဦ:
၂။	M.Sc. ၁ – ဦ:
၃။	M.V.Sc. ၄၂ – ဦ:
စုစုပေါင်း ၄၅ ဦ:
မွေးမြူရေးပညာဌာန၏ အဓိကသုတေသနလုပ်ငန်းများကို Animal Production နှင့် Animal Nutrition ဘာသာရပ်များကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်အစာကုန်ကျစရိတ်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် မွေးမြူရေးပညာဌာနရှိ တိရစ္ဆာန်အစာများ၏ အာဟာရတန်ဖိုးကို တိုင်းတာသည့်ကိရိယာများ၊ ဝက်များ၏ ကျောပြင် အဆီထုကိုတိုင်းတာသည့်ကိရိယာ၊ ကြက်ဥဖောက်စက် စသည်တို့ကို သုတေသနလုပ်ငန်း အတွက် လက်တွေ့အသုံးချဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ နောင်အနာဂတ်တွင်လည်း တိရစ္ဆာန်မွေးမြူထုတ်လုပ်ရေးပညာနှင့် ပတ်သက်၍ ခေတ်မီတိုးတက်ပြီး မွေးမြူရေးသမားများ လက်တွေ့အသုံးချနိုင်စေမည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်မှန်းထားပါသည်။
‘မွေးမြူဆေးကုတိုင်းပြည်ပြု’ဟူ၍ ပြည်ကျိုးပြုဆောင်ပုဒ်ဖြင့် နိုင်ငံ့အကျိုးသည်ပိုး ရွက်ဆောင်နေသောအမိတက္ကသိုလ်တွင် မွေးမြူရေးပညာဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏ ပြည်သူလူထုအတွက် မွေးမြူရေးကဏ္ဍတနည်းအားဖြင့် အသား နို့ ဥ တည်းဟူသောအဓိကစားနပ်ရိက္ခာ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်လျှက် ရှိနေပေသည်။ နှစ်စဉ်တိုးတက်လာသော နိုင်ငံ့လူဦးရေအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်မျှတပြီးအဟာရပြည့်ဝသောစားနပ် ရိက္ခာများဖူလုံအောင် ထုတ်လုပ်ပံ့ပိုးနိုင်ရေးအတွက် အမိတက္ကသိုလ်မှ မွေးထုတ်ပေးလိုက်သော တိရစာ္ဆန် ဆေးကုဆရာဝန်များ ကအရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ကို မိမိအနေဖြင့် အလွန်ပင် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ မွေးမြူရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ပိုမိုထိရောက် မြန်ဆန် လာစေရေးအတွက် ထိထိမိမိအထောက်အကူပြုနိုင်စေရန် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ အမိတက္ကသိုလ်တွင် မွေးမြူရေးပညာအထူးပြုသင်တန်းများ သတ်မှတ်ပို့ချနိုင်ခဲ့သဖြင့် ယခုအခါ မွေးမြူရေးအထူးပြု ဘွဲ့ရပညာရှင် (၁၅၀) ခန့်ကို မွေးမြူထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်ထွက်ပေါ်လာမည့် အမိတက္ကသိုလ်က မွေးထုတ်ပေးလိုက်သော မွေးမြူရေးပညာအထူးပြု မွေးမြူရေးဘွဲ့ရပညာရှင်များနှင့် တိရစာ္ဆန်ဆေးကုဆရာဝန်များသည် နိုင်ငံတော်၏ အသား နို့ ဥ လိုအပ်ချက်များအတွက် အရည်အသွေးရောအရေအတွက်ပါ ပြည့်မီစွာထုတ်လုပ်ပံ့ပိုးနိုင်ရေး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ဥယျောဇဉ်ပြုလိုက်ရပေသည်။
ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်နှင်းဆွေ ဒေါက်တာခင်ခင်လေး ဒေါက်တာရန်လင်းအောင် ဒေါ်သိမ့်သီရိ
BVS, MPhil, PhD (UPM BVSc, MVSc(UVS) BVSc, MVSc LLB, LLM, DML
ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး တွဲဖက်ပါမောက္ခ ကထိက လက်ထောက်ကထိက
[email protected], ၀၉၉၆၆၀၅၄၂၆၀ [email protected], ၀၉၉၇၈၅၉၅၃၄၀ [email protected], ၀၉၄၃၀၄၁၃၁၉ [email protected], ၀၉၂၆၃၃၇၅၆၀၀
ဒေါက်တာရဲအောင် ဒေါက်တာထက်လင်းဦး ဒေါက်တာဖြိုးထက်ထက်ကျော် ဒေါက်တာအေးသီတာမောင်
BVSc, MVSc BVSc, MVSc BVSc, MVSc BVSc, MSc(Kyushu), MVSc
လက်ထောက်ကထိက လက်ထောက်ကထိက လက်ထောက်ကထိက လက်ထောက်ကထိက
[email protected], ၀၉၂၅၉၅၂၆၈၃၇ [email protected], ၀၉၉၇၆၉၁၅၇၂၁ [email protected],၀၉၄၂၀၇၆၉၀၅၃ [email protected], ၀၉၉၇၅၄၄၃၇၅၅
ဒေါက်တာဆုသက်မှူးနိုင် ဒေါက်တာသဲမို့မို့လွင် ဦးအောင်သိန်း ဦးကျော်သိန်း
BVSc, MVSc BVSc BA (Myanmar)
သရုပ်ပြ သရုပ်ပြ ဌာနခွဲစာရေး ဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင် (၂)
[email protected], ၀၉၉၆၁၅၉၀၅၉၁ [email protected], ၀၉၄၄၄၂၂၅၆၈၂ ၀၉၄၅၄၈၆၃၉၄၃ ၀၉၉၆၈၆၄၈၆၄၆
ဒေါ်အုန်းမြင့် ဒေါ်ထွေးတင် ဦးကျော်ဇေယျာမျိုးမင်းသိန်း ဒေါ်အေးစိုး
ဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင် (၂) ဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင် (၃) ဓာတ်ခွဲခန်းကျွမ်းကျင် (၄) ဥယျာဉ်လုပ်သား
၀၉၉၇၉၉၄၆၆၄၅ ၀၉၇၉၇၇၁၀၆၉၁ ၀၉၂၅၀၃၇၈၇၅၆ ၀၉၆၉၆၂၁၉၅၂၉